Indlu yomyili engaselunxwemeni, iWild Atlantic Way - I-Airbnb
Indlu yomyili engaselunxwemeni, iWild Atlantic Way
I-Cottage ikwiiyadi ezili-100 ukusuka elunxwemeni olunesanti ubude bemayile kunye neMinaun Cliffs - phakathi kwezona ziphezulu eYurophu. Intsapho yakwaToolis ineminyaka engaphezu kwama-400 ihlala apha. Ilali yamatye yaseDookinella eshiyiweyo isamile kwibala elisecaleni.
Ilali yaseKeel ikwimizuzu emi-5 ngeendawo zokutyela, ibhula yalapha ekhaya ithengisa itakane legusha iAchill kunye nabalobi abathengisa kwisikhephe. Isikolo sokusefa kuyo yonke iminyaka. Ukuhamba okumangalisayo kuqala kanye emnyango ukusuka kulula ukuya kwiintaba. Ilungele izibini kunye neentsapho. I-wifi yasimahla. Isitulo esinamavili siyafikeleleka.
Indawo yokuhlala evulekileyo egcwele ukukhanya ihlulwe ibe yikhitshi egcweleyo, indawo yokutyela enetafile kunye nezitulo, kunye negumbi lokuhlala elinomlilo ovulekileyo we-turf (sibonelela ngayo yonke into efunekayo ukuyenza) kwaye ijonge elwandle. Yonke ifestile kuyo yonke i-cottage inemibono yolwandle okanye iintaba. Ngemini entle unokubona amahlengesi etsiba emanzini. I-cottage yonke, ngaphakathi nangaphandle, ifikeleleka ngokupheleleyo ngesitulo esinamavili.
I-cottage inegumbi elinye elikhulu eliphindwe kabini elinendawo eninzi yempahla. Kukho ibhedi ephindwe kabini kwigumbi lokulala kunye nebhedi yesofa kabini kwigumbi lokuhlala, ilungele isibini okanye abantwana ababini abancinci. Kukwakho nebhedi enye yesofa ekhoyo, kunye nebhedi.
Igumbi lokuhlambela elikhulu elinethayile lineshawari entle ngaphezulu. Kukho umatshini wokuhlamba impahla, indawo yokomisa kunye neline yempahla ngaphandle. Kukho amagwegwe ngaphandle komnyango wangaphambili weempahla zokuqubha ezimanzi njl.njl.
Ikhitshi eligcweleyo lixhotyiswe kakuhle kwaye lineoveni, ihobhi, ifriji, umatshini wokuhlamba izitya, imicrowave kunye netoaster. Kukho indawo yesikhenkcisi kwizikhenkcisi zesifuba eshedini.
I-cottage ihonjiswe ngeeragi esibuye nazo ukusuka kuMbindi Mpuma kwimigangatho epeyintiweyo.
4.90 · Izimvo eziyi-165
Sihamba nje imizuzwana ukusuka elunxwemeni - mhlawumbi ecaleni kwendlela yelali okanye ngaphezulu kwesimbo esisezantsi kwegadi. Xa umsinga ophantsi, ungangena eKeel malunga nemizuzu engama-20. Kungenjalo luhambo lwemizuzu emi-5 ukuya kwivenkile enkulu kaKeel, kwindawo zokutyela, kwindawo yentselo, ibhula yasekhaya yegusha iAchill kunye nomthengisi weentlanzi onentlanzi esandul’ ukubanjiswa kwisikhephe sabo.
Sikufuphi nelali engenabantu, apho kwakuhlala intsapho yomyeni wam. Umyeni wam ukhenketha ilali kunye neendawo zasekuhlaleni ezinomdla. Nceda ujonge iwebhusayithi yeColony Tour.
Zininzi iimidlalo zamanzi, kubandakanya ukusefa kunye nekitesurfing, kunye nesikolo esisemagqabini sokusefa sabantwana nabantu abadala esibizwa ngokuba ziiBlackfields. Wamkelekile ukuba uboleke kwingqokelela yethu enkulu yeesuti ezijingayo eshedini.
Unokuhamba ngokuthe ngqo ukusuka kwi-cottage - ukusuka kwiindawo ezilula ukuya kwiintaba. Mininzi iminyhadala yasehlotyeni kwi-Achill ehlala ibandakanya ukhenketho lokuhamba, ke lujonge. Sinako ukukwazisa ngeziganeko zasekuhlaleni.
IGreenway - eyona ndlela inde yaseIreland kumjikelo wendlela ecaleni komgaqo kaloliwe ongasasetyenziswayo - iqala eAchill Sound. Inokuhanjwa okanye ngebhayisekile.
Kukho iidrive ezimangalisayo ngakwiAtlantiki Drive ukuya eKeem Bay, apho unokuntywila emanzini, uqubhe kwaye ubone ookrebe, intlanzi yaselwandle kunye needolphin.
My family of writers and filmmakers are fortunate to live on beautiful Achill Island, in the home next door to the Well Haggard Cottage. We look forward to welcoming you. We love t…
Sihlala ebumelwaneni ngoko siza kukwazi ukuphendula nayiphi na imibuzo. Ukuba asikho ngenxa yaso nasiphi na isizathu, zininzi izalamane ezinokunceda kule lali! Yindawo encinci kwaye abantu banobuhlobo kakhulu.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Keel